Film-ka uu sameynayo Akshay Kumar ee Pad Man wuxuu lumin doonaa 30% Dhaqaalaha laga filayo, Sababtu waa Filim kale dartiis! | Gooldhalin
Suuqa Aflaanta Hindiga ah ee Bollywood ayaa gelaya weji kale. Balse qofna kama maarmi karo in uu daawado filimka Akshay Kumar ee Pad Man, wuxuu shaashadaha soo fuulu doonaa horraanta 2018-ka. In uu noqdo mid Shineemooyinka oo dhan la saaro waxaa hor istaagaya filimka Padmaavat.
Filimka Taariikhiga ah ayaa la filayay in Shaashadaha lasoo saaro December 1, 2017 balse dib ayuu uga dhacay. Keddib markii Jilaayaashiisa ay waayeen Central Board of Film Certification (CBFC), jilaayaasha ayaana billaabay maalmo keddib filimka waxayna soo bixiddiisu kusoo aadeysaa Pad Man. Pad Man waa mid si wanaagsan loo diyaariyay Sidharth Malhotra ayaa sidoo kale soo sameynaya markaas filimka Aiyaary, wuxuuna leeyahay isaguba sheeko xiiso badan. Balse hadda, Pad Man wuxuu dhibaato badan ka wajahayaa Padmaavat oo ah kan ugu weyn ee kula tartami doona Suuqa.
Waxaa dadka Hindiga xiiseeya la weydiiyay Pad Man haddii ay isku mar soo baxaan Padmaavat. Falanqeeye dhanka Suuqa Aflaanta ah oo la yiraahdo Atul Mohan ayaa yiri, “Waxay ku xirnaan doontaa uun soo dhoweynta uu helo filimka Padmaavat. Sida haddaba muuqata, Rajasthan iyo Madhya Pradesh loo mamnuucay oo kale ayey suuragal tahay in isagana loo mamnuuco.
Waxay ku xirantahay Khasaare uu suuqa kala kulmo Pad Man. Balse labaduba maahan wax sahlan Padmaavat. Sanado ka hor ayaa la filayay, balse wuxuu u haray markii uu wajahay Bandit Queen.
Pad Man ma lumin doono wax ka yar 30% taageerada iyo dhaqaalihii uu filayay, waayo Padmaavat waa film kale oo aad loo wada sugayo oo cajiib ah.